विहानमा गर्नै नहुने ५ गल्ती ...
के तपाइँ विहान उठ्दा जहिले पनि खराव मुडमा हुनुहुन्छ ? विहानको खाजा नै नखाने समेत गर्नु भएको छ कि ? यदि यस्तो हुने गरेका छौं भने सामान्य कुरामा ध्यान दिने हो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यहाँ विहानमा गर्न नहुने ५ गल्तीको चर्चा गरिएको छ ।
१ उठ्ने वित्तिकै गह्रौं काम नगर्नुस्
२ जिउ नतान्काउनुस्
३ चिया नखानुस्
४ उठ्ने वित्तिकै फोन नहेर्नुस्
५ ब्रेकफाष्ट सँधै खानुस्
कतिपय मानिसहरु विहानै देखि मुडअफ हुने र विहानको खाजा नखाने गल्ती गर्छन् । तर त्यस्तो बानी राम्रो होइन । विहानको खाजा नखाँदा मोटो पन बढ्ने, मधुमेह र कमजोरी बढ्ने हुन्छ । विहानको खाँजा राम्रो खाएमा दिनभरीका लागि शरीर नै स्फुर्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विहानमा ब्रेकफाष्ट नखाँदा दिनभरी अन्य खराव खाना खानु पर्ने र त्यसले समस्या निम्त्याउने हुन्छ ।